Ebumnuche 5 kacha elu na anaghị m eji ndepụta ede ọ bụla. | Martech Zone
Ana m agbake n'ihe m kwenyere bụ isi ọwụwa migraine nke mbụ m taa. Ya mere, enwere m olile anya na anaghị m eme ihe ọjọọ na post a not ọ bụghị ọgụ, naanị ịmata ihe.
Y’oburu n’itinyebeghi blog ya na mbụ, enwere ozi juru na ya ProBlogger. Ihe m na-enweghị ike ịchọpụta n'oge na-adịbeghị anya bụ ihe kpatara na ọ bụla ọkwa ọ bụla kwesịrị ịbụ ụdị ndepụta ụfọdụ?
Enwere uru na ndepụta nke ọdịnaya gị? Enweela m ndepụta na ọdịnaya m na mbụ, mana ọ bụ naanị mgbe m chere na ha na-eduzi ma ọ bụ bụrụ isi ihe m chọrọ ịkọ. Amaara m na ndị mmadụ na-achọ 'Top 10' na 'Top 100' na ọnụọgụ ndị ọzọ maka ndepụta, mana anaghị m ahụ 'Top' na ụfọdụ ndepụta ProBlogger.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọkwa ọ bụla nwere nọmba nwere nọmba ụfọdụ. Kedu ka o siri mee?
Lee ndị Top Ebumnuche 5 nke na anaghị m edepụta ndepụta ọ bụla:
Ọ naghị agụ ka mkparịta ụka.
Ndepụta bụ mgbe ụfọdụ dị iche iche… otu onye nwere ike ịnwe otu isi ma ọ bụ otu narị isi na isiokwu ọ bụla. Gịnị kpatara ọnụ ọgụgụ ahụ ji dị mkpa?
Ntufe nke edepụtara aha na-ada ụda ing belụsọ na blọọgụ gị gbasara ndepụta, n'ezie.
Ihe ndị edepụtara na-abụkarị okwu dị nkenke, ma hapụ ọtụtụ ohere maka nkọwa ma ọ bụ mkparịta ụka.
Oge ụfọdụ, ihe ndị ikpeazụ na-adị gị ka ihe ị ga - eche eche… naanị iji nwaa ị ga - agụ ihe ịchọrọ. Achọrọ m 5.
Ọkt 11, 2006 na 9:10 PM
Ndepụta dị mma. Lee ụfọdụ echiche:
1. Anaghị m eji ndepụta ọ bụla - nke ikpeazụ 10 naanị 2 bụ n'ezie ndepụta ederede (otu onye ọzọ hotara ndepụta nke onye ọzọ dere)
2. mgbe m kwuru na - na-amasị m na ndepụta ụdị post. O na adiri m ha mfe ide na odi mfe igu. N'ime posts m, ndepụta ndị ahụ na-abụkarị ndị a ma ama na ọtụtụ ndị na-ekwu banyere ya.
3. Abụ m onye ndepụta dị ndụ n'ezie - ana m eme ha ogologo ụbọchị dum iji nyere m aka ịhazi onwe m - yabụ echere m na ọ bụ ụdị edemede ederede m.
4. isi okwu gi banyere ihe ndi edere bu okwu nkenke bu eziokwu - n’agbanyeghi ihe edetu nke m na ede n’ozuzu ha nwere isiokwu ma obu paragraf n’azu ha. N'uche, ha yiri nnọọ edemede edemede nke m dere na nkwupụta mmeghe na mbido paragraf ọ bụla yana nkọwa ya ma emesịa. Nanị ezigbo ihe dị iche bụ na a na-atụgharị ma ọ bụ na-agụ ọnụ ọgụgụ isi ma na-enwe obi ike isi okwu iji mee ka ọ gbarie.
5. otu n'ime ndị kasị uru nke anatara bụ na ha bụ ndị scannable. Nnyocha n'ime ọgụgụ n'ịntanetị na-egosi na ọtụtụ mmadụ na-emeghachi omume na anaghị agụ nnukwu ederede na nyocha ọdịnaya maka isi ihe tupu ha alaghachi ịgụ otu isiokwu. Achọpụtara m na usoro ndepụta na-enyere aka na nke a.
6. M na-adịghị n'ezie n'ime mechie anatara n'ihi nke na-na a certian nọmba na N'ihi ya dere ọtụtụ anatara nke 9, 12 na ndị ọzọ iju nọmba. Ejirila '10' ndepụta m nke ikpeazụ wee depụta ndepụta nke XNUMX mana ọ na - adịkarị njọ karịa ihe ọ bụla - edere m akwụkwọ m wee laghachi gụọ isi ihe m na njedebe ma jigidesie ihe ọ bụla m bịara.
N'ezie - ana m etinye ọnụ n'ihe ị na-ekwu. Amaara m na enwere ike ịmefe ndepụta ma mara maka ya - n'ihi ya, m na-anwa ịgwakọta ya ntakịrị. Daalụ maka echiche gị - anaghị ewere ya dị ka mwakpo ma ọ bụ nkatọ na-arụ ọrụ - ekele.
Ọkt 11, 2006 na 9:25 PM
Nke a bụ ezigbo nzaghachi na-enyere m aka ịghọta ntakịrị. Ọ bụrụ na ekwughị m ya tupu m sie ike, abụ m nnukwu blog gị. Otu n’ime ihe m hụrụ n’anya gbasara blọọgụ gị bụ na ọ dị ka ihe mbụ. Ka m na-enyocha ihe ntanetịime m na ikwughachi posts (taa ọ bụ njikọ Google na Ederede na Spreadsheet), nke gị na-abụkarị na isiokwu ọhụrụ.
Daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge iji zaa ntinye m! Ọ bụ ihe obi ụtọ ịbụ onye "ProBlogger" na-eleta onwe ya.
Ma - Achọrọ m eziokwu ahụ ị depụtara azịza gị. 🙂
Ọkt 11, 2006 na 10:09 PM
daalụ Doug - chere na ọ dị mkpa ka ị bụrụ ndepụta 😉
Ana m anwa idebe ihe mbụ na PB - ọ bụ ezie na enwere ụbọchị ebe a ga-ekpuchi ozi ọma echere m.
daalụ maka nzaghachi - m ji ya kpọrọ ihe.